မြစ်ဆုံဆည် ဝန်းကျင်မှာ ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်တဲ့ တန်ဖဲရွာသားများ၏ အသနားခံစာ တင်ပြစာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြစ်ဆုံဆည် ဝန်းကျင်မှာ ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်တဲ့ တန်ဖဲရွာသားများ၏ အသနားခံစာ တင်ပြစာ…
မြစ်ဆုံဆည် ဝန်းကျင်မှာ ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်တဲ့ တန်ဖဲရွာသားများ၏ အသနားခံစာ တင်ပြစာ…
Posted by ဘဲဥ on Mar 20, 2012 in Copy/Paste |5comments
မူရင်း ။ ။ဒီမိုဝေယံ
သူတို့ က ရပ်သွားပြီပြောပေမဲ့ အခုသတင်းအရ လုံးဝယုံကြည်နိုင်ခြင်းမရှိ ရသေးပါဘူး။ တိတ်တဆိတ်လုပ်နေ ကြတာတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက် video မှတ်တမ်းတင်ပြီး ချပြနိုင်မှာ တော်ကာ ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့လို လုပ်နိုင်သူများ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ စစ်ခွေးစစ်အာဏာရှင်တွေ လက်အောက်မှ ဘယ်တော့များလွတ်မြောက်မလဲ။
မင်းမှာ သစ္စာ လူမှာ ကတိ
It should sue to responsible persons at the justice to permit the China Company without studying environmental effects.
သမ္မတဂျီးရေ့ ဘယ်လိုလဲဗျာ။ သမ္မတထက် အာဏာပိုရှိတဲ့လူများရှိနေလို့လား ?????